10 zavatra tsy maintsy fantatrao alohan'ny handraisanao ny DMAA | AASraw
/Blog/Gallery/ 10 zavatra tsy maintsy fantatrao alohan'ny handraisanao ny DMAA
Posted on 11 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Ny DMAA dia zava-mahadomelina namboarina izay manampy amin'ny fanorenana vatana, fandoroana vatana ary ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tenan'ny fotoana sy ny fihetsiketsehana. Ity lahatsoratra ity dia ahitana tombony ho an'ny dosage DMAA sy ny mety ho vokatry ny 1,3-dimethylamylamine.
Inona ny DMAA?
hahazoana hevi-javatra inona is DMAA tokony ho iray amin'ireo zavatra izay tokony hanamafisana ny atleta fampiroboroboana alohan'ny fampiasana ny fanampiana. Ny DMAA izay endrika fohy momba ny chemo dimethylamylamine dia zava-mahadomelina izay noheverina ho fofona avy amin'ny menaka natiora jerena. Na izany aza, tamin'ny alàlan'ny fikarohana dia niorina izany 1, 3 dimethylamylamine dia namboarina tao amin'ny laboratoara.
Antsoina hoe 1,3 DMAA ihany koa, ny medikaly dia mizara rafitra mitovy amin'ny germanium azo avy amin'ny zava-mahadomelina. Izany no antony maro noeritreretin'ny olona fa ny DMAA ihany koa dia mitovy amin'ny karazana zava-mahadomelina. Ny fampiofanana DMAA aloha dia teny mitovitovy amin'ny olona izay mampiasa ny fanampiana satria ampiasaina indrindra indrindra amin'ireo izay te hanomboka ny birao sy ny fanokafana fivoriana.
Ny poeta DMAA dia nentina voalohany tao amin'ny tsena nataon'i Eli Lilly sy Company tao amin'ny 1944. Ny fitsaboana dia nahita fampiasana betsaka amin'ny fitsaboana ho toy ny fanonganam-panjakana. Ny fampiasana zava-mahadomelina dia natao ho an'io tanjona io satria hita fa mamokatra vokatra mitovy amin'ny fampiasana ny ephedrine sy pseudoephedrine.
Tamin'ny voalohany, maro ny olona no mino fa avy amin'ny rongony jerena ny DMAA. Noho izany antony izany dia mahazatra ny mahita orinasa maro mamokatra DMAA supplement mampiseho ny sarin'ireo rantsana rose jerany, toy ny fakany sy ny fotony. Na izany aza, na dia eo aza izany finoana izany dia maharitra amin'ny fanandramana ny laboratoara ao amin'ny DMAA.
Voaporofo fa ny DMAA dia voarindra ao amin'ny laboratoara ary tsy dia ara-boajanahary satria ninoana ela be. Taorian'ny fampidirana voalohany ny tsena, dia nivarotra tambiny ny zava-mahadomelina satria atahorana ny valiny ny atleta. Izany dia hatramin'ny 1983 rehefa nesorina tao amin'ny tsena ny entana.
Ny fakana an-keriny dia voaporofo tamin'ny filazàna fa tsy azo antoka ny hivarotana amin'ny famoaham-bahoaka. Ity fandraràna ity dia nahatonga ny tsy fahampian'ny zava-mahadomelina raha mbola teo am-pivarotana tao amin'ny tsena mainty. Ny fivarotana ho an'ny DMAA fanampiny dia naverina indray tao amin'ny 2006 rehefa nividy ny anarana vaovao, Geranamine.
Tsy ampy ny famokarana DMAA. Raha ny tokony ho izy, dia nampidirina an-tsokosoko ny famatsiam-bidy ary nekena ho fanafody fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena. Ny famerenana indray ny zava-mahadomelina any amin'ny mpahay simia dia nangataka fifandirana bebe kokoa momba ny fiarovana ny fampiasana azy ho an'ny atleta fampiroboroboana.
Ny olana dia tena manakiana mafy loatra fa ny FDA sy ny Drug Administration (FDA) dia mbola manontany ireo mpamokatra ny fanampiana mba hanaporofoana ny mety ho ampiasainy raha tsy misy vokany mahatsiravina. Ireo firenena tahaka an'i Kanada koa dia nahatonga ny ahiahiny mikasika ny tanjony, ary voarara izany.
Tsy mahasoa koa ny fampiasana atleta mifaninana toy ny ao amin'ny 2010, ary ny Fikambanana Anti-Doping World dia vao haingana no nanoratra azy io ho toy ny voka-dratsiny izay voarara tsy ampiasaina. Noho izany, ny atleta iray nahita ny zava-mahadomelina dia mety ho voarara tsy handray anjara amin'ny fanatanjahantena fifaninanana. Noho ny adihevitra mifandraika amin'ny fampiasana azy dia voararan'ny miaramila amerikana koa ny DMAA.
Ny famenoana dia vao haingana teo amin'ny fivarotana miaramila mba hifehy ny fampiasana azy. Ao Nouvelle Zélande, tsy azo atao ihany koa ny fampiasana ny zava-mahadomelina. Heverina ho tsy ara-dalàna ihany koa any Etazonia amin'izao fotoana izao.
Inona no ampiasain'ny DMAA?
Ny rafitra tena miasa amin'ny, ny DMAA dia tsy voaporofo. Na izany aza, ny zava-mahadomelina dia heverina ny hanala ny fihetsika adrenalinina voajanahary. Amin'ny fampiasana, ny DMAA dia mivantana mivantana amin'ny rafi-pitabatabana ao an-toerana.
Ny zava-mahadomelina dia fantatra amin'ny famolavolana tsindrimandry izay mitovy amin'ny fampiasana kafeinina. Na izany aza, ny fomba fihetsika amin'ny DMAA dia tsy mitovy amin'ny kafeinina. Rehefa nalaina, ny DMAA dia miteraka ny famokarana noradrenaline izay hormonina izay mavitrika mandritra ny fotoam-pitsapana na ny tahotra.
Ny hormonina dia mirakitra ny tratran'ny adrenalinina izay hita eo ambonin'ny voa. Rehefa mivoaka ny hormonina dia mivezivezy ao amin'ny ra, ary miteraka fitombon'ny fo izany.
Ny famokarana noradrenaline koa dia manandratra ny rafitra vatana hanafahana glucose amin'ny tahirin'ny glycogen. Izany dia mitarika ny fitomboan'ny angovo ao amin'ny vatana, ary izany no tena atahoran'ny atleta alohan'ny fampiofanana. Ny fampiasana ny DMAA koa dia hitondra fiovana kely amin'ny lafiny sasany toy ny fahanginana, fanentanana ary fanehoan-kevitra.
Izany no iray amin'ireo antony voalohany mahatonga ny atleta DMAA hatraiza hatraiza alohan'ny hanombohan'ny fotoam-pivoriana. Ny fanafody dia manome fahatsapana hery be izay mahatonga ny atleta haniry hanao asa iray izay handany ny angovo tafahoatra. Ny fampiasana ny DMAA dia namonjy atleta avy amin'ny fahatsapana herin'ny hery avy amin'ny kafeinina izay ampiasaina matetika.
Ny DMAA dia fanatsarana ny kafeinina, ary ireo izay mampiasa azy mandritra ny fotoana lava dia mety hanomboka hanana fiankinan-doha. Midika izany fa tsy maintsy ilaina ny fampiasana azy. Rehefa ampiasaina, dia manosika ny atidoha hahatonga ny fahatsapana haingam-pandeha mahery vaika.
Misy fiantraikan'ny fiakaran'ny tosidra miaraka amin'izany. Vokatr'izany fomba fiasa izany, maro ny olona manakorontana ny zava-mahadomelina. Na izany aza, misy atleta sasany mampiasa ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny fikasana hanorina ny vatany. Ireto manaraka ireto ny sasany amin'ny fampiasana ny DMAA:
1. Fandoroana fetsy
Amin'ny ankapobeny, ny vatana dia mandoro ny tavy mihoatra loatra. Na izany aza, izany dia mety hitranga amin'ny taham-pahantrana mihoatra noho ny zavatra mahafinaritra. Mba hanafaingana ny dingana dia nampiasaina tamin'ny atleta fampiroboroboana ny fampiasana fanafody. Ny ankamaroan 'ireo fanafody ireo dia steroids toy ny Nootropics.
Ny fampiasana fanafody toy izany dia manatsara ny tahan'ny fandoroana. Ny DMAA dia mahomby araka ny fitrandrahana hafa fantatra amin'ny fandoroana ny matavy be loatra. Ny ankamaroan'ny fivoriana fanatontosana dia natao hanatratrarana ny vokatra marobe, ny lehibe indrindra amin'izy ireo dia ny fihenan'ny fetin'ny vatana tafahoatra izay manome ny antso iray tsy mitaraina.
Ny tavy loatra ihany koa dia mety hampidi-doza ho an'ny atleta tsara toy ny toe-javatra iray izay afaka manatsara ny fanakanana ny lalan-dra. Rehefa mitranga izany dia hisy ny oksizenina kely ao amin'ny ra ary ny hetsika amin'ny ankapobeny dia mety ho voakasika be. Ankehitriny, ny fanalahidy hanesorana ny toe-javatra toy izany dia amin'ny fampiasana zava-mahadomelina toy ny DMAA izay manome ny vatanao amin'ny angovo mahery.
Indray mandeha dia miondrika ny mpampiasa mba handray anjara amin'ny hetsika izay handany ny herin'ny hery, ary vokatr'izany, mety hisy ny fihenan-tsakafo ny voka-dratsiny sy ny tsy fahampian-tsakafo. Ny zava-mahadomelina dia hita fa mahomby tokoa amin'ny fandoroana vatana , ary zava-dehibe ho an'ny atleta izay te-hanatratra izany indrindra indrindra mandritra ny fanonganana ny offseason. Tsy misy fetrany ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina.
Raha ampifandraisina amin'ny fampandrosoana toy ny kafeinina, ny DMAA dia hita mba hanatsara ny fiasan'ny metabolika amin'ny manodidina ny 35%. Izany dia manampy amin'ny fanatsarana ny taham-piterahana matavy amin'ny marika lehibe. Ny zava-mahadomelina dia miasa amin'ny fiarovana azy io matavy Talohan'io, ny vatana dia mampiseho fa mitranga izany.
Satria ny hetsika DMAA dia mifandray mivantana amin'ny rafi-pitabatabana ao an-toerana, ny zava-mahadomelina dia miantoka fa manosika io fihetsika io amin'ny haingana kokoa. Amin'ny fanentanana, ny CNS dia maneho fihetsika manentana ny fanehoan-kevitry ny serasera izay ahafahan'ny fatin'orana. Noho izany, mety mety ny mampitaha ny asan'ny DMAA amin'ny alika hafa mampitombo ny fiterahana eo amin'ny tsena.
Ny zavatra manan-danja indrindra alohan'ny fanatanjahantena dia angovo. Izany no antony tokony hijerena izay mety hanome anao ireo fitaovam-piadiana ireo mba handehanana mialoha. Mesomorph pre workout dmaa
dia ny karazana zavatra hanomezana vatana iray ny fanombohana mety, izay takiana mba hahombiazanao ny asanao.
Araka ny voalaza teo aloha, dia fantatra ny zava-mahadomelina hampisy fiantraikany mitovy amin'ny pseudoephedrine. Ity zava-mahadomelina ity dia hahatonga ny mpampiasa amin'ny fomba "avo". Izany dia manome iray amin'ny tahirin-tsolika lehibe izay ilaina ho an'ny weightlifting.
Ho an'ny vokatra tsara indrindra, ny zava-mahadomelina izay manome hery be dia be alohan'ny fotoam-pivoriana. Izany dia hametaka ny mpampiasa miaraka amin'ny angovo azo avy amin'ny angovo fa ny zavatra rehetra ilaina amin'ny fanatontosana ny atleta dia mitaky ny fanombohan'ny androny. Ny zava-mahadomelina toy izany dia mahatonga izany amin'ny fiantraikany amin'ny fizotran'ny vatana voajanahary amin'ny vatany.
Mandritra ny tsimokaretina, mampitombo ny vasodilasiona ny fanafody. Izany dia dingana izay mitranga indraindray rehefa misy hafanana tafahoatra ao anaty rivotra. Ny vatana dia mihetsika amin'ny fitomboan'ny habaka. Natao hanomezana ra maromaro ho an'ny hoditra izany ho an'ny fanadiovana.
Ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina manaitra ny fampihorohoroana dia misy oksizenina mitoka-monina izay mampiroborobo ny fitaran'ny rà mandriaka amin'ny alàlan'ny vasodilasiona. Ity dia tombony fanampiny ho an'ny atleta, indrindra mandritra ny a mialoha workout. Raha vao lehibe, dia mihamitombo ny faritra manodidina ny fitaterana ra.
Izany dia hanome ny atleta miaraka amin'ny fandefasana ny hivoahan'ny ra izay tsy nisy akory talohan'ny nisotroany ny zava-mahadomelina. Aorian'izay dia azo atao ny fampiofanana maivana, ary manan-kery ny atleta hampandroso ny fampandrosoana.
Na dia izany aza, ny fampiasana ny DMAA ho an'io fanajana io dia hita fa mifanohitra amin'izay mety ho andrasan'ny ankamaroan'ny olona momba ny zava-mahadomelina mampitombo. Raha tokony hampitombo ny vasodilation toy ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina azomika, ny DMAA dia mifanohitra amin'izany. Izy io dia miteraka vasokonstriksyon izay mahazatra mandritra ny vanim-potoana rehefa ambany ny mari-pana amin'ny rivotra.
Amin'ny fotoana toy izany, mitolona ny vatana mba hihazonana ny hafanany, ary izany dia vokatry ny fialana ny ra avy amin'ny hoditra. Izany anefa dia mitranga rehefa avo loatra ny dosage ary tsy tokony hanahy amin'ny olona iray izay mikasa ny handray ny DMAA.
3. Manampy amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tenan'ny fotoana sy ny fihetsiketsehana
Tiany ny hitadidy izay rehetra ilainy. Na izany aza, tsy matetika izany raha ny fiainan'ny olona no tratran'ny tranga marobe izay mahatonga azy ireo hitranga. Ny DMAA dia mety ho fanampiana mahasoa amin'ity endriny ity.
Ny fanadihadiana nataon'ireo mpampiasa an'ity fanampiny ity dia nanambara fa ireo izay voakasik'izany dia nanana fahatsiarovana tsaratsara kokoa noho ny teo aloha. Noho izany, na dia tsy dia maro aza ny olona no hitondra ny zava-mahadomelina amin'ny tanjon'ny fanatanterahana izany, dia ho toy ny fiantraikany amin'ny fihenan-tsakafo izany. Ary izany no iray amin'ireo tombontsoa voalohany raisin'ny olona maro amin'ny fampiasana ny DMAA, na izany aza dia mitranga tsy misy ny drafitra.
Ny fihoaram-pefy avo lenta ihany koa dia toetra iray izay maniry ny hiaina atleta maro. Ny fampiasana ny DMAA dia mahatonga ny vatany ho mailo tsara, ary manatsara ny fahaizan'ny fahombiazana izany. Midika izany fa ny mpiserasera DMAA dia mavitrika kokoa, indrindra mandritra ny fanorenan-tena na amin'ny fifaninanana. Ny rongony dia miasa amin'ny fanatsarana ny tahan'ny vatana.
Izany no mahatonga ny vatana ho avy faingana kokoa noho ny mahazatra. Ity dia hita maso ara-batana amin'ny fananana olona iray izay mavitrika sy mailo. Na izany aza, ny hany sisa tavela tamin'ity antoko ity dia ny fandrarana ny fampiasana ny zava-mahadomelina amin'ny fifaninanana.
Noho izany, tsy ampiasaina ny fampiasana azy hanatsarana ny fihetsika henjana mandritra ny atletisma. Na izany aza dia mbola azo ampiasaina amin'ny atleta izy ireo mandritra ny offseason mba hahazoana vahana sy fanatsarana haingana.
Moa ve ny fanafody DMAA azo antoka?
Tokony ho fiahiana ny olona mandray anjara amin'ny lalao fifaninanana. Ny lisitry ny zava-mahadomelina dia anisan'ireo zava-mahadomelina izay tsy azo antoka ho an'ny fandaminana doping an'izao tontolo izao. Maro ireo vondrona hafa no voafetra ny fampiasana ny DMAA amin'ny sehatra manokana. Na izany aza, lohahevitra iray izay naneho fomba fijery samihafa.
Ny masoivoho misahana ny sakafo sy ny fitsaboana ataon'ny United States (FDA) dia mihevitra ny fanafody DMAA ho tsy azo antoka ho an'ny fanjifan'ny olombelona. Ny manampahefana dia milaza fa tsy misy ny fampahalalana momba ny asan'ny DMAA izay manatsara azy ho zava-mahadomelina azo antoka. Ao amin'ny vohikalan'ny maso, ny vatana dia manoro hevitra ny olona mba hisorohana ny fampiasana ny zava-mahadomelina amin'ny vidiny rehetra, satria mety hampidi-doza azy ireo izany.
Ny iray amin'ireo tranga voalohany amin'ny FDA dia ny fahaiza-manaon'ny zava-mahadomelina izay miteraka vahaolana. Ity no heveriny ho dingana avo lenta avo lenta izay afaka mitarika ho amin'ny fahafatesana raha tsy efa nomanina hatry ny ela. Ny voka-dratsin'ny aretin-tsaina hafa izay mety hahatsapa ny fampiasana ny DMAA dia ahitana fahasarotana amin'ny fifehezana, ny aretim-po ary ny mety ho fisian'ny aretina.
Araka ny filazan'ny FDA, ny fampiasana ny zava-mahadomelina koa dia mety miteraka aretina ara-pihetsiketsehana satria izy io dia miasa amin'ny alalan'ny fiantraikany eo amin'ny rafi-pitabatabana ao an-toerana. Mety hampidi-doza izany satria mety hiteraka tsy fahampian-tsakafo sy fahasarotana hafa izany.
Ny FDA dia tena nanam-pahombiazana amin'ny fiantohana fa ny DMAA miaraka amin'ny famenoana dia nesorina tamin'ny tsena manontolo. Ny fanalahidin'ny fepetra samihafa izay noraisin'izy ireo dia ny famoahana dokotera mpahay siansa miaraka amin'ny taratasy izay mampitony azy ireo amin'ny fivarotana DMAA miaraka amin'ny fanampiana. Raha toa ka mahita tratra toy izany ao amin'ny talantalana izy ireo, manontany ireo mpivarotra mba hamotika azy ireo ary tsy hiantehitra amin'ny baikony hafa avy amin'ny mpamokatra.
Hatramin'izao, maro ireo orinasa no efa nifanaraka. Nanomboka tamin'ny 2012 ity fanentanana ity, ary nahitana vokatra feno izany satria misy ny fivarotan-tsakafo DMAA amin'izao fotoana izao. Nisy ihany koa ireo tranga izay nanohanan'ny orinasan'ny orinasa sasany ny famokarana DMAA na dia efa nangatahana ny hampitsaharana ny FDA aza izy ireo.
Ny tranga toy izany dia navoaka tao amin'ny 2013 rehefa nijanona ny orinasa iray antsoina hoe USPLabs mba hampitsahatra ny fametrahana ny fanampiana. Najanon'ny FDA ny asany, ary voatery namotika ireo vokatra efa eny an-tsena ny orinasa. Ny sandam-barotra nomena azy dia efa ho $ 8 tapitrisa.
Ity dia mampiseho ny halaviran'ny fahafahana misafidy mba hiantohana fa ny famokarana fanafody DMAA dia hajanona ary tsy zava-mahadomelina iray ihany no mahita ny lalan'ny olom-pirenena. Ny FDA dia nanao dingana lavidavitra kokoa ary nitanisa ireo anarana samihafa izay azon'ny mpampiasa ampiasaina mba hisakanana ny mpanjifa tsy hahafantatra fa very ny DMAA izy ireo. Taorian'ilay fahafaha-misaina dia nahatsikaritra fa maro ny orinasa namokatra ny zava-mahadomelina amin'ny anarana miafina mba hisakanana ny mpanjifa tsy hamantatra mivantana ny fisotroan-dronono.
Ny sasany amin'ireo lisitra anaty lisitra dia ahitana ny Geranamine sy Methylhexanamine. Ny orinasan-tsika hafa dia maneho fa ny vinaingitra dia misy ny zavamaniry Geranium. Ity dia endriky ny fisian'ny DMAA. Ny FDA dia mampitandrina ireo mpanjifa mba hiheverana ny fanampiana rehetra misy firaketana amin'ny Geranium.
Ny faneriterena dia mitovy amin'ny firenena hafa toa an'i Kanada sy Nouvelle Zélande ary ny maro hafa eto amin'izao tontolo izao. Ny zava-manahirana lehibe indrindra dia ny fiantraikany amin'ny rafi-panafody. Ny sampan-draharaha manohitra ny doping amin'izao tontolo izao koa dia nitanisa DMAA vovoka eo amin'ny zava-mahadomelina izay tsy azo antoka ho an'ny fampiasan'ny olona. Midika izany fa voarara ny fampiasana atleta izay mandray anjara amin'ny fifaninanana tahaka ny World Cup.
Na izany aza dia omena alàlana amin'ny fampiasana amin'ny fifaninanana sasany, indrindra amin'ny dosage ambany izay ao anatin'ny ambaratonga. Na izany aza, dia tsara foana ny manantitrantitra ny fepetra mifehy ny fifaninanana izay mandray anjara amin'ny fikarakarana ny zava-mahadomelina mba hisorohana ny fitsaboana.
Ny lohahevitra momba ny hoe azo antoka ve ny DMAA dia nanapa-kevitra hafa indray taorian'ny sedra maro samihafa teo amin'ny FDA sy ny orinasa hafa. Ny orinasa dia mbola nanizingizina fa tsy misy ny voka-dratsy momba ny fivarotana ny fanampiana nokleary. Ny fanadihadiana iray dia nahatonga fa ny DMAA dia tena vokatra avy amin'ny orinasa Geranium ary io dia nanohitra ny FDA.
Na izany aza, ny sampan-draharaha dia tsy nanome porofo manohana ny famerenana ny filazany fa nahazo ny zava-mahadomelina izy. Araka ny voalazan'ny dokotera iray namotopototra ny filazana fa tsy azo antoka ny fampiasana ny fanampiana, dia tsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny olona salama ara-dalàna izay nampiasa ilay fanafody. Nilaza ny dokotera fa ny habetsahan'ny DMAA hita tao anatin'ireo fanafody efa natao talohan'ny fampiofanana dia ambany noho izay heverina ho toaka ho an'ny olombelona.
Ao amin'ny fanandramana hafa, ireo tanora nampiasa ny DMAA ho toy ny fandeferana mandritra ny antoko dia hita fa nahatonga aretina mahazatra, fikorotanan-drivotra. Izany dia nanamafy bebe kokoa ny filazan'ny FDA mikasika ny fiarovana amin'ny fampiasana ny DMAA amin'ny fanampiana. Na izany aza, ny fanadihadiana iray hafa dia nanaisotra ny porofo manohana ny FDA taorian'ny nahitana fa nampiasa fanafody avo lenta ny tanora.
Hita taratra fa nalain'izy ireo ny fanafody izay misy ny 600mg amin'ny voany. Io dia avo lenta toy ny tamin'ny toe-javatra mahazatra, ary ny vola be antitra indrindra dia manodidina ny 60mg amin'ny iray pilina fanampiny. Midika izany fa ireo folo taona ireo dia nandany im-polo ny zavatra tokony hoentin'izy ireo.
Amin'ny fomba fijery siantifika, ny zava-mahadomelina dia azo heverina ho toy ny fitsaboana mialoha ny fisakafoanana raha toa ka raisina ny dipoavatra azo avy amin'ny fanafody. Raha raisina amin'ny dosage ambony noho ny 75mg ny DMAA, dia misy ny fahafaha miditra amin'ny tsindry alaina amin'ny tsindry alaina, ary tokony horaisina izany. Ny fampiasana zava-mahadomelina dia tsy tokony ho ampiasain'ireo olona izay tsy nanana tantaram-panafody tamin'ny lasa fa ny fampiasana azy dia mety hampitombo ny toe-javatra.
Ankoatra izay, na dia tsy nankasitrahan'ny orinasa maro mamokatra ny zava-mahadomelina aza ny FDA dia manana teboka mikasika ny fampiasana ny fampiasana ny DMAA. Noho izany, tsy azo atao ny manilikilika ny ahiahiny ary manohy ny fividianana ny fanampiana avy amin'ny tsena mainty. Ny fifampiraharahana amin'ny dokotera alohan'ny fampiasana ny DMAA vovoka poezia dia tsy maintsy ilaina.
Izany dia ahazoana antoka fa ny vokatra tadiavina dia tratra raha tsy mandevina ny fiarovana ara-pahasalaman'ny mpampiasa.
Inona no tokony ho fantatra alohan'ny handraisana ny fanafody DMAA?
Maro ny zava-misy mety hitranga amin'ny fanatontosana ny atleta fampiroboroboana amin'ny alàlan'ny alohan'ny fametrahana ny DMAA ho fitaovam-pandrenesana efa voaomana. Ny sasany amin'ireto zavatra ireto dia ahitana ny fiantraikany izay mety ho hitanao ary koa ny tombontsoa azonao avy amin'ny fampiasana azy.
Ny Kilonga amin'ireo zavatra tokony ho fantatrao dia ny fiantraikan'ny fampiasana ity zava-mahadomelina ity dia mitovy amin'ny zavatra azo iainana aorian'ny fampiasana kôkainina sy methamphetamine. Midika izany fa ny fampandrosoana ny fiankinan-doha dia tena avo lenta satria ambony izy eo anivon'ireo mpanentana malaza indrindra. Tokony ho fantatrao fa afaka manokatra ny vatanao amin'ny iray amin'ireo fiankinan-doha mahery indrindra ianao rehefa miezaka manatsara ny asanao.
Mba hisorohana ny fahabangana amin'ny fiankinan-doha, dia tokony ho azonao antoka fa arakaraka ny zavatra inoan'ny dokotera anao ny fahasalamanao. Ilaina ihany koa ny hahatakatra fa ny fampiasana ny zava-mahadomelina dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny rafi-pitsaboana ao an-toerana. Ny DMAA dia miasa toy izany amin'ny kafeinina amin'ny fanamaivanana ny tahan'ny fandraisana amin'ny CNS izay mahatonga ny vatanao ho mailo.
Ny zava-mahadomelina dia matanjaka kokoa noho ny kafeinina ary hanome vatana ny vatanao ho an'ny vatanao izay mila manomboka ny fotoam-pandalinana mandritra ny fotoam-pankasitrahana. Noho izany dia zava-dehibe indray ny manamarina ny dosage izay mihinana anao satria ny zava-mahadomelina dia misy fiantraikany mivantana amin'ny iray amin'ireo faritra marefo indrindra. Anatinà tranga iray notaterina tao amin'ny 2012, vondron'olon-jazavavy iray dia nampiasa ny zava-mahadomelina nandritra ny fotoam-pivoriana.
Nandritra ny folo taona mahery izy ireo no nila nandoa onitra. Ny tanjon'izy ireo dia ny 'haingam-pandeha haingana', ary izany dia lasa ny fandikany. Ny zava-mahadomelina dia niantraika tamin'ny rafi-pitabatabem-bahoaka, ary ny ankamaroany dia hita fa misy tsiran-tsinay misy aretina afindrana.
Ny mpampiasa ihany koa dia tokony hahatakatra fa tsy toy ny fiofanana maro hafa izay misy oksizenina mitoka-monina, ny DMAA dia miteraka fihenanam-po. Midika izany fa ny olona iray izay nitondra ny pilina DMAA dia hihena ny fantsom-panafody noho ny olon-kafa tsy manana. Ity toe-javatra ity dia mety ho faty raha toa ka mitranga amin'ny olona iray manana olana amin'ny fiakaran'ny tosi-drà izany raha toa ka mety hiteraka fahasimihan'ny aretina izany.
Noho izany, ny olona iray izay mijaly amin'ny fiakaran'ny tosi-drà dia tsy tokony hampiasa ny DMAA.
Ny fampiasana ny zava-mahadomelina dia mety hitarika ny fitomboan'ny rà sy ny fahatsapana hery be. Mety hampidi-doza ny fampidirana ny fanampiana amin'ny fanafody fampihetsiketsehana hafa satria mety hiteraka hery lehibe izay tsy ho vitanao izany. Tsara ny mahatakatra fa ny DMAA dia singa iray mialoha ny fanatanjahan-tena izay tsy tokony hampiasaina amin'ny tanjona hafa.
Ny olona sasany dia efa nampiasa zava-mahadomelina toy ny fampakaram-bady, saingy diso izany. Mety hitarika mankany amin'ny koma izany raha misy manararaotra ary tokony hotsaraina foana izany mandritra ny fampiasana azy.
DMAA mialoha ny fanatontosana ary ny fiantraikany eo amin'ny fiasan'ny traikefa
Taorian'ny fampiasana ny DMAA, dia nisy olona niaina ny fiantraikany teo amin'ny fiasan'ny atidoha, anisan'izany ny hafanana sy ny fery. Ara-dalàna izany, ary midika izany fa ny vatanao dia mety hanimba ny zava-mahadomelina. Na izany aza, ny voina sy ny hafanana dia mety tsy voatery mivantana mivantana amin'ny fampiasana DMAA. Ny chimique dia voarakitra ao amin'ny fanafody izay misy mpikambana hafa, ary mety ho antony mahatonga ny boka ihany koa.
Ankoatra izany, ny vokatra hafa eo am-piandohana dia matetika amin'ny fampiasana fanentanana toy ny DMAA. Anisan'izany ny:
Tapaka ny torimaso torimaso
Ny fiterahana sy ny fampinonoana
Maro ny fanampim-panafody tonga miaraka amin'ireo sokajin'olona tsy afaka ampiasaina, ary ny manan-danja amin'izy ireo dia ahitana reny mampihetsi-po sy ireo bevohoka. Ny antony ao ambadik'izany dia satria, raha ny vehivavy bevohoka, ny fampiasana zava-mahadomelina dia tena mety hisy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny zaza tsy ampy taona. Na izany aza, na dia betsaka aza ny fampahalalam-baovao mahakasika ny fampiasana fanafody maro ho an'ny vondrona sokajin'olona, ​​dia tsy izany no zava-misy amin'ny fanafody DMAA eo aloha.
Misy fampahalalana mamaivay momba izany. Noho izany, ireo izay mikasa ny hampiasa ny DMAA ho fanafody efa mialoha ny fampiharana dia tokony hiala tsy hanao izany noho ny tsy fisian'ny fampahalalana vitsivitsy momba ny vokatra andrasana. Ity dia safidy azo antoka fa tsy hamela ny mpampiasa hampisy fiantraikany izay tsy noeritreretiny akory.
Ny medikaly DMAA dia sokajiana ho famporisihana. Midika izany fa mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny mety hisian'ny fandidiana azo antoka, indrindra rehefa nalaina taloha kelin'ny fandidiana. Noho izany, mba hisorohana ny toe-javatra toy izany, dia tsara ny manakana ny fampiasana izany raha toa ianao ka mikasa hanao fandidiana.
Tsara ny manakana ny tsy handevozina alohan'ny fandidiana. Izany dia ny misoroka ny tosidra ambony izay mety ho faty mandritra ny fandidiana.
Ity no fiantraikany mahazatra indrindra izay mitovy amin'ny olona mampiasa ny DMAA. Izany dia satria ny zava-mahadomelina dia fampihetseham-po ary ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina ao amin'ity kilasy ity dia fantatra amin'ny famporisihana ny tosidra avo indrindra indrindra rehefa manararaotra. Ny DMAA dia miteraka ny fampidirana ny rà mandriaka, ary izany dia mahatonga ny rà hivezivezy haingana toy ny mahazatra izay miteraka tosidra ambony.
Noho io fiantraikany io, ny fampiasana ny DMAA dia hita fa miteraka aretina hafa toy ny fikorotanan-tsaina. Amin'ny trangan'io soritr'aretina io dia tokony hiala amin'ny fampiasana ny rongony avy hatrany ny mpampiasa. Izany dia satria ny fampiasana azy dia mety hampitombo ny soritr'aretina ary mety hitarika fahafatesana koa.
Na izany aza, azo atao ny misakana ny fiakaran'ny tosi-drà amin'ny alàlan'ny fihenan-tsakafo. Hanome valiny tsara indrindra izany raha toa ka azon'ny dokotera iray atao ny mitsabo mba hamaritana izay mety amin'ny dosia.
Hafiriana no mijanona ao amin'ny rafitra ny DMAA?
Ny làlana mahazatra indrindra amin'ny fitantanana ny DMAA dia am-bava. Rehefa raisina toy izao dia hisotro valo minitra eo ho eo ny rongony mba hidirana ao amin'ny rà. Na izany aza dia tsy ho tsapa avy hatrany ny vokany satria ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina dia antsoina hoe antsasaky ny fiainana. Ity no fotoana ilàna ny zava-mahadomelina mba hanjavona sy hamoaka ny zavatra ao anatiny ho lasa vatana.
Ny antsasaky ny fiainan'ny DMAA dia manodidina ny ora 8. Noho izany, ny olona iray izay maniry ny hanatsara ny vatany alohan'ny fivoriam-pahaizana dia tokony handray ny famoaham-bolo 8 ora alohan'ny hanomezana fotoana ampy ny fidirana ao amin'ny vatana.
Taorian'ny fampiasana ny zava-mahadomelina, dia mahatsapa ny fahatsapana ankapobeny ny fisainana. Amin'ny ankapobeny dia tsy fahatsapana fa ny ankamaroan'ny olona dia te-hiaina ny rehetra amin'ny fotoana manokana indrindra indrindra rehefa tsy miasa izy ireo. Noho izany, ilaina ny mahafantatra hoe rahoviana no horaisin'ny fanafody entina miala amin'ny vatany aorian'ny fampiasana azy.
Amin'ny ankapobeny, ny fanafody dia mitoetra ao amin'ny vatana mandritry ny ora 24 ora iray aorian'izay dia tsy nahatsapa intsony ny fahatsapana.
Ny tombony ho an'ny DMAA amin'ny fiterahana
Angamba, efa nandre angano sy zava-misy maro momba ny fahaiza-manaon'ny DMAA ianao, ary te hahalala hoe iza amin'izy ireo no misy dikany. Eny, ny zava-misy dia ny fampiasana DMAA dia afaka manampy anao handatsaka lanjany betsaka amin'ny fomba maro samihafa.
Voalohany, ny fanampiana Dimethylamylamine dia afaka manampy anao hampitombo ny fifantohana sy ny antony manosika anao hampitombo ny fandeferanao amin'ny fangirifiriana sy ny hery. Ny fampitomboana ny herin'ny hery sy ny fandeferana dia hanampy anao hahomby amin'ny fanatanjahan-tena mafy.
Raha ny fandoroana ny fatin-doko, ny 1 3 Dimethylamylamine dia iray amin'ireo firehetana matsiro mahatsiravina indrindra. Tahaka ny ankamaroan'ny fanafody matavy mifoka sigara, ny DMAA dia manainga ny fandoroana ny fetibe haingana kokoa noho ny mahazatra amin'ny tranga iray izay tsy hitranga loatra ny fandoroana ny tavy.
Manontany tena ianao inona no ataon'ny dmaa? mba handoro ny fatin'ny tenanao?
Eny, mampitombo ny herinao amin'ny alalan'ny vasokonstriction ny DMAA, fizika iray izay miteraka ny famerana ny fatran'ny ranao. Ny fitomboan'ny rà mandriaka dia mahatonga ny fitomboan'ny hozatra sy ny fanentanana hozatra. Amin'izay dia mitombo ny tahan'ny metabolisma, mitarika amin'ny fandoroana vatana mangatsiaka haingana sy mahomby kokoa.
Ny firafitry ny DMAA, ephedrine sy amphetamines dia mitovitovy amin'ny fitoviana. Amin'izany, ny DMAA dia afaka manandratra ny rafi-pitabataban'ny olombelona, ​​ka mahatonga ny atidoha hanafaka ny norepinephrine. Ankoatra izany, mahatonga ny mpitsabo ny alpha sy beta hanatsara ny asany nadrenrenalinina, ka mahatonga azy hanintona indraindray ny rafitr'ity fitantanana adrenergika ity.
Ny fitambaran 'ireo fihetsika roa ireo dia miteraka fitomboan'ny metabolika amin'ny vatany ary koa ny fatiantoka mavesatra avy amin'ny tsiranoka miaina mba hamokarana angovo - io lopy io dia antsoina hoe lipolysis.
Ny fiantraikan'ny DMAA dia mety hampitombo be raha ampiasaina miaraka amin'ny fitaovana hafa mampitombo toy ny kafeinina.
Raha ampiasaina miaraka amin'ny kafeinina, dia mitombo ny fiantraikan'ny DMAA amin'ny metabolic rate amin'ny 35% raha mitombo mihoatra ny 169% ny fatran-jiro matavy.
Tao anatin'ny fanadihadiana vao haingana natao hamotopotorana ny fahombiazan'ny DMAA amin'ny fandoroana fatin'olona, ​​ny olon-dehibe 32 salama iray izay nanondraka kapsilan'ny ampitomboiny isan'andro ho an'ny 14 andro dia nahitana fihenan-danja lehibe.
Ny vokatry ny DMAA
Tahaka ny zava-mahadomelina hafa, ny DMAA dia mety hisy fiantraikany hafa raha ampijaliana. Ireto ny sasany amin'ireo mety DMAA:
1. Hery ateraky ny serafima
Na dia tsy misy porofo mifandray mivantana amin'ny DMAA mivantana aza any amin'ny fipoahana tampoka, dia misy tranga iray voalaza fa misy olona iray izay namolavola ny fepetra taorian'ny nisotro toaka be sy ny DMAA. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa tsy tokony hampiasaina miaraka amin'ny alika ny DMAA raha tsy izany dia mety hitranga ny vokatra hafa.
2. Ny ratra vokatry ny fo
Ny endriky ny aty amin'ny aty dia ny fanasitranana ny rà mandriaka ao amin'ny digestive alohan'ny hamelana azy handalo any amin'ny faritra hafa amin'ny vatana. Ankoatra izany, ny atiny dia mamono zava-mahadomelina ary manala voly simika koa.
Rehefa mandray ny pilina DMAA na ny zavatra fanampiny ianao dia tsy maintsy atrehin'ny aty amin'ny zavatra misy ny zava-mahadomelina / supplement. Vokatr'izany, ny atiny dia mety hiaina fananganana enzyme izay mety hahatonga azy ho toaka. Ny zava-mahadomelina koa dia mety miteraka aretina ny fo, izay mety amin'ny fotoana mety ho simba na aretina maharitra.
3. Ny tosidra ambony
Ny fiheverana fa ny fampandrosoana, ny dimethylamylamine dia mety hampitombo ny tsindry. Amin'ny maha-izy azy, ireo olona mijaly amin'ny tosidrà avo dia tokony tsy hisotro amin'ny rongony na ny fanafody misy azy.
4. Ny fo tsy ara-drariny (ny aretiota fo)
Na dia mahalana aza, ny vokatry ny DMAA dia mety mitarika ho amin'ny fo amam-pihetseham-po ary mety hampihena ny aretiota fo ho an'ny olona mijaly amin'ny toe-javatra izany. Noho izany raha sendra fandidiana ianao dia voatery haka ny DMAA tapa-bolana mialoha ny daty fandidiana, raha tsy izany, ny fitomboan'ny tosidra ambony sy ny tsy fahampiana fo mitresaka noho ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina dia mety hanelingelina ny fandidiana.
Ao amin'ny fanadihadiana natao hamotopotorana ny vokatry ny DMAA, ny fikarohana dia nanondro fa ny olon-dehibe 12 salama dia samy nandany kapsily roa an'ny OxyELITE Pro, sakafo fanampiny misy ny dimethylamylamine, dia nitombo ny tahan'ny fony ary niakatra ny tosidra.
Na dia izany aza, olon-dehibe salama maromaro izay nandray ny dosie 25 mg of DMAA dia nanana fo mitera-pahazavana sy ny tsindry aloka na dia taorian'ny fitsaboana azy aza. Izany dia manamarika fa tsy misy fiantraikany amin'ny taham-pon'ny fo na ny tsindry amin'ny tsindrona ny zava-mahadomelina raha toa ka mihinana azy.
5. Fampiakarana ny glaukom
Ankoatra ny fiantraikany amin'ny fatrany, ny dimethylamylamine koa dia miteraka ny famadihana ny fantson-dra. Ny voka-dratsin'ny vokatra roa dia mety hitarika amin'ny fiakaran'ny karazana glaucome sasany. Noho izany dia azo atao ny tsy misotro ronono raha misy glaucome.
6. Ny fahasimban'ny menaka
Nisy ihany koa ny tranga mikasika ny fahasimbana ateraky ny areti-mando noho ny DMAA. Dimampolo taona lasa izay, ny olona 36 izay nandray ny OxyELITE Pro, sakafo fanampiny amin'ny DMAA ho fitaovana, dia voamarina tamin'ny fahasimban'ny aty. Maty iray ny marary iray raha mbola velona roa ny hafa taorian'ny taolana iray.
Tsara ny manamarika fa ny marary 36 rehetra dia nandray ny doka nomen'ny supplement saingy ny 27 amin'izy ireo dia naka dika iray maimaim-poana amin'ny DMAA. Noho izany, dia tsy mora ny mametraka ny votoatin'ny toaka ao amin'ny fanampiny.
Ny fampiasana ny DMAA koa dia nampifandraisina tamin'ny fandehanan'ny atidoha. Raha ny marina, tranga tranga telo no voan'ny tazo nandritra ny fampiasana ny DMAA. Na izany aza, dia efa nanamarina fa nampiasa ny zava-mahadomelina niaraka tamin'ny alikaola na kafeinika ireo niharam-pahavoazana.
Ao anatin'io tranga io, ny olona salama dia nandray ny dosie nomeny amin'ny sakafo fanampiny ahitana ny dimethylamylamine ary taorian'izany dia nanomboka niaina loha goavam-be izy ary nodorana tamin'ny fandosirana tao amin'ny atidoha.
8. Fijanonan'ny fo tampoka
Misy tranga iray voamarika momba ny lehilahy 22 lahy efa antitra izay namolavola aretim-po taorian'ny fampiasana Jack3d, sakafo fanampiny izay ahitana DMAA miaraka amin'ny kafeinina mandritra ny telo herinandro.
9. Miala tsiny sy mitabataba
Ny fandinihana iray mijery ny vokatry ny DMAA dia mampiseho fa 15% ny vahoaka 56 izay nitondra fanafody izay nahitana ny zava-mahadomelina (OxyElite Pro) dia nandoto sy nandia zava-mahadomelina taorian'ny nanaovana ny fanampiana. Na dia izany aza dia tsy nisy porofo naseho raha io no DMAA ao amin'ny fanampiny izay nahatonga ny fihenan-tsakafo sy ny bitsiky na ny zavatra hafa dia tompon'andraikitra.
10. Fahalemena tsy maharitra
Ny vokatra mahazatra indrindra mifandraika amin'ny fampiasana ny DMAA dia fihenan'ny angovo ('crash') mandritra ny ora vitsivitsy aorian'ny fitsaboana azy. Na izany aza, tsy ny olona rehetra mampiasa ny zava-mahadomelina no mahatsapa ny vokany.
Ny vokatra hafa mety ho an'ny DMAA dia:
Fahavoazana amin'ny fahatsiarovan-tena
Fahafatesana (na dia mahalana aza)
Ireo no mety ho vokatry ny DMAA. Na izany aza, tsy misy ny fikarohana izay mandinika manokana ny vokatry ny zava-mahadomelina. Ny ankamaroan'ny fikarohana momba ny vokatra azo avy amin'ny zava-mahadomelina dia mitaky ny fanampiana amin'ny sakafo miaraka amin'ny DMAA ho toy ny iray amin'ireo ingredients ho solon'ny fanafody. Raha jerena fa tsy misy ny fanafody azo avy amin'ny zava-mahadomelina ao amin'ny fanampim-panafody, dia tsy misy marina amin'ny famintinana fa vokatry ny DMAA ny vokatra hafa. Ireo zavatra hafa ao amin'ny fanampim-panafody dia mety ho vokatry ny voka-dratsy.
Ankoatra izany, amin'ny tranga sasany, ny vokatry ny vokatra dia vokatry ny fisorohana ny vokatra avy amin'ny DMAA. Ny sasany amin'ireo mpampiasa nahatsapa ireo fiantraikany ireo dia voatery nizatra tamin'ny 1,000 mg isan'andro. Amin'ny toe-javatra tahaka izany, dia azo atao ny miala amin'ireo vokatra ireo raha toa ka misy mifoka amin'ny taharo mahazatra. Hiresaka momba ny dosage mety DMAA ao anatin'ny fotoana fohy isika.
Ankoatra izany, 1, 3 dimethylamylamine dia hita fa misy fiantraikany goavana eo amin'ny rafi-pitabatabana ao an-toerana raha ampiasaina miaraka amin'ny tosika CNS na ny nootropic izay misy fiantraikany amin'ny rafitra adrenergika. Mety hiteraka vokatra isan-karazany izany. Noho izany, raha te hisoroka ny fiantraikany ianao, dia tadidio fa tsy mampifandray ny DMAA amin'ny fanentanana na ny tsy mitongilana.
Ankoatra izany, tokony amporisihina ny fanafody DMAA tsy tokony hampiasaina isan'andro. Noho izany, inona no tokony atao hoe dosioma dimethylamylamine?
Ny dosimetatra dimethylamylamine mety dia miankina amin'ny toe-javatra isan-karazany toy ny taona sy ny fahasalaman'ny mpampiasa, amin'ny toe-javatra hafa. Na izany aza, amin'izao fotoana izao dia tsy misy fanazavana ara-tsiantifika izay azo ianteherana amin'ny fametrahana ny dosage mety amin'ny zava-mahadomelina.
Raha toa ka efa nividy ny vokatra DMAA momba ny fatiantoka matavy / matavy ianao dia miantoka fa mamaky sy manaraka ny torolàlana ampiasain'ny mpampiasa azy ianao ary mifantoka amin'ny dokotera, pharmacist na mpitsabo hafa manam-pahaizana manokana alohan'ny fampiasana izany.
Amin'ny ankapobeny, ny dima voalazan'ny DMAA dia avy amin'ny 10 mg ka 20mg. Na serivisy ½ iray amin'ny vokatra DMAA mifototra amin'ny safidinao. Izany dia hanampy anao hahita sy hahatsapa ny mety ho fiantraikany amin'ny zava-mahadomelina raha raisinao amin'ny doka feno izany.
Rehefa mandeha ny fotoana, dia mety hampitombo ny doka amin'ny 40 na 60 mg isan'andro. Na izany aza, tsy misy porofo marina fa manohana ny doka.
Toa izy ireo ny tahan'ny standard amin'ny vokatra misy ny dimethylamylamine. Ny sanda dia vokatry ny fampiasana ny fampiasana ny mpamokatra ny fanafody DMAA amin'izao fotoana izao eo amin'ny tsena.
Tsy tokony hampiasa ny vokatra DMAA isan'andro ianao raha te hahatratra ny vokatra tsara indrindra. Ny ankamaroan'ny fanafody DMAA dia mandany azy roa na in-telo isan-kerinandro amin'ny ankamaroany. Amin'ny fampiasana ny fanampim-panafody toy izany, dia mora mora ianao mba hisorohana ny fiankinana miankina amin'ny vokatra.
Ampiasao ny pilina DMAA raha mila hery na fikolokoloana vao haingana na eo ho eo amin'ny 30 minitra alohan'ny hanaovana fampiharana ara-batana. Amin'ny fanaovana izany, dia ho afaka hisoroka ny sasany ianao mialoha ny fanatontosana ny vokatra hafa.
Ny Topika 4 Top Aterineto Mahafaty Mahafaty
Misy karazana zava-mahadomelina izay manampy ny fatiantoka matavy amin'ny fampihenana ny faniriana, ny fampitomboana ny fikorontanan'ny vatany sy / na ny fihazonana ny fialan-tsasatra marina. Ny fanafody matavy mifoka sigara dia mety hahatonga ny olona hanana fahafaha-manao zavatra tsara kokoa amin'ny fampitomboana ny heriny ary hifantohana.
Ity tabilao manaraka ity dia mampiseho ny fivarotam-panafody lehibe efatra maneran-tany.
Ny anaran'ny dokotera sy ny nomerao CAS Ahoana no ataony?
Synephrine powder -CAS: 94-07-5 Ny vovony synephrine dia betona-agonista miasa amin'ny fampitomboana ny tahan'ny metabolika, ny fampiasana kalorie ary ny angovo angovo.
1,3-dimethylamylamine (poids DMAA) - CAS 13803-74-2 Miaraka amin'ny rafitra simika mitovy amin'ny Ephedrine, ny 1,3-dimethylamylamine dia singa-manilikilika amin'ny endriny izay ampiasaina ho toy ny zavatra lehibe indrindra amin'ny fanampiana amin'ny sakafo ho fanampiana amin'ny fanatsarana ny fahombiazana ara-panatanjahan-tena sy ny fanatsarana ny angovo.
Clenbuterol hydrochloride-CAS 21898-19-1 Ankoatra ny fananana hery matanjaka matavy, ny Clenbuterol hydrochloride koa dia manana fiantraikany miteraka tononika amin'ny fampitomboana ny tsindrona tosika ary mampirisika ny fo hiasa mafy.
Ankoatr'izany dia mahatonga ny glycogen ho tapaka, hany ka mandoro ny vatana.
Salbutamol (Albuterol) - CAS 18559-94-9 Ny solubuterol dia nampiasaina tamin'ny alàlan'ny asma aretina miteraka aretina manimba ny taovam-pananahany. Na izany aza, amin'izao fotoana izao, ny fampiasana zava-mahadomelina dia nampiasaina hampiroboroboana ny fihenan-tsakafo haingana, ho an'ny fikolokoloana ny tazomoka mandritra ny fitondrana tavy fatiantoka ary koa ny fanamafisana ny fiaretana rehefa manao fanatanjahan-tena matavy.
Raha te hividy dmaa na ny iray amin'ireo zava-mahadomelina fanafody matavy ianao, dia azonao atao fotsiny ny mangataka malalaka amin'ny AASraw, com.
Ny 1, 3-dimethylamylamine dia manome tombontsoa maro, anisan'izany ny fanampiana amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tenan'ny fotoana fohy sy ny fihetsiketsehana, ary koa amin'ny fanorenana vatana sy ny fandoroana vatana. Na izany aza dia tokony ho azonao antoka fa hikaroka mpitsabo malaza ianao ary hifikitra amin'ny dosie voatokana mba hisorohana ny mety ho fiantraikany hafa, toy ny fiakaran'ny tosi-drà, ny aretim-po sy ny lozam-pifamoivoizana, ary ny loza hafa mifandray amin'ny fahasalamana.
Na dia izany aza, ny fanarahana ny dosia mety dia tsy antoka fa tsy hahatsapa ny vokany ratsy ianao. Tsara koa ny manamarika fa tsy misy porofo ara-tsiansa mampifandray ireo vokatra mivantana amin'ny fampiasana ny DMAA; Izany hoe, raha tsy misy ny fanampim-bary fanampiny.
Bloomer RJ1, Farney TM, Harvey IC, Alleman RJ - Sofisialy momba ny kafeinina sy ny 1,3-dimethylamylamine supplementation amin'ny lehilahy salama - Hum Exp Toxicol. 2013 Nov; 32 (11): 1126-36. doi: 10.1177 / 0960327113475680. Epub 2013 Feb 19.
Schilling BK (1), Hammond KG, Bloomer RJ, Presley CS, Yates CR. - Ny fiantraikany ara-tsaina sy ara-pahasalaman'ny reny 1,3-dimethylamylamine amin'ny lehilahy - BMC Pharmacol Toxicol. 2013 Oct 4; 14: 52. doi: 10.1186 / 2050-6511-14-52.
"1,3-dimethylamylamine," Examine.com, navoaka tao amin'ny 24 April 2014, novaina farany tamin'ny 14 June 2018,
Vorce SP, et al. Dimethylamylamine: zava-mahadomelina mitondra vokatra tsara ho an'ny amphetamine. J Anal Toxicol. (2011)
Gee P, Jackson S, Easton J. Fisotroana bitter iray hafa: tranga misy poizina avy amin'ny fanafody fanafody DMAA. NZ Med J. (2010)
Ny Merck Index: Rakipahalalana momba ny simika, zava-mahadomelina, ary biolojika (Boky).
Lisi A, et al. Fandinihana ny methylhexaneamine amin'ny fanafody solitany sy nygeriana. Angano. (2011)
Bloomer RJ, et al. Ny fiantraikan'ny 1,3-dimethylamylamine sy kafein irery fotsiny na miaraka amin'ny fihenan'ny fo sy ny tsindry amin'ny lehilahy sy ny vehivavy salama. Phys Sportsmed. (2011)
MAG inhibitor sy FAAH Inhibitor: JW-642 & OL-135 & PF-750
Fitsarana lalindalina kokoa amin'ny Testosterone Cypionate The Top 10 esterter testosterone: inona no mety aminao?